बढ्यो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ, यसरी कठिनाईसँग जुध्दै नापेको थियो नेपाली टोलीले(हालसम्मको विवरणसहित) « Lokpath
बढ्यो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ, यसरी कठिनाईसँग जुध्दै नापेको थियो नेपाली टोलीले(हालसम्मको विवरणसहित)
काठमाडौं । सगरमाथाको उचाइ ०.८६ मिटरले बढेको छ । यसअघि ८८४८ मि रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेर ८८४८.८६ मि पुगेको हो ।
आज(मङ्गलवार) नापी विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरे ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि शुरु गरिएको सगरमाथाको उचाइ मापन प्रक्रिया हालै सम्पन्न भएर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उचाइ सार्वजनिक गर्ने अनुमति दिएपश्चात् घोषणा गरिएको हो ।
खुशीको कुरा के छ भने यसपालि नेपाल सरकारले पहिलोपटक आफ्नै लागत र जनशक्तिसमेत खर्चेर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो ।
सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा दुई देशले संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने सहमति भएको थियो जसअनुरुप नेपाल र चीन दुवै पक्षका सरकारी टोलीहरुको संयोजकत्वमा उचाइ नापिएको छ । दुवै देशले एकै समयमा नयाँ उचाइ घोषणा समेत गरेका छन् ।
यसअघि सर्वे अफ इण्डियाले सन् १९५४ मासगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो जुन हालसम्म कायमै थियो ।
सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयका संयोजक एवं विभागका प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोलका अनुसार १३ सदस्यीय प्राविधिक टोली सो कामका लागि गएका थिए । प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा नापी अधिकृत रवीन कार्की, सर्भेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज धितालले सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीमा थिए । त्यस्तै, पिक प्रमोशन प्रालिका छिरिङ जाङ्बु शेर्पाको नेतृत्वमा पेमा ङिमा शेर्पा, आङ्बु शेर्पा, आङ पासाङ शेर्पा र केशव पौडेलले यस कार्यमा गाइडको काम गरेका थिए ।
कसरी नापियो उचाइ ?
सन् २०१७ को डिसेम्बरमा नेपाल सरकारद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशालामा अमेरिका, जापान, चीन, भारत, न्यूजिल्याण्ड, इटली लगायतका देशहरूको उपस्थिति थियो जसमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने प्रविधि र पद्धतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।
जस अन्तर्गत दुई प्रकारका प्रविधि : जिपिएस प्रविधि र ग्लोबल नेभिगेशन स्याटेलाइट सिस्टम(जिएनएसएस) अपनाएर उचाइ मापन गरिएको हो ।
सन् २०१९ मा मापन टोलीका दुईजना नापी विभागका अधिकारीहरू शेर्पा गाइडसँग सगरमाथाको चुचुरोसम्म ग्लोबल नेभिगेशन स्याटलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) नामक उपकरण साथमा लिएर पुगेका थिए । चुचुरोमा १ घण्टा १६ मिनेट रहेर उपकरणमार्फत् भूउपग्रहबाट पठाएका डेटा, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण, मौसम सम्बन्धि तथ्याङ्कहरु संकलन गरियो ।
त्यस्तै, चुचुरोमा राखिएको उपकरण र सगरमाथालाई मध्य भागमा राखेर चारै दिशातर्फ नियन्त्रण बिन्दूहरुमा राखिएको उपकरणबाट उचाइको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, खोटाङ लगायत स्थानमा पर्ने करिब ३ सय बिन्दूहरुबाट सर्वेक्षकले सर्वे सम्पन्न गरी तथ्याङ्क संकलन गरेका थिए । सगरमाथा क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट लेभलिङ सर्भे गरिएको थियो ।
यसअघि मापन गर्दा कतिसम्म पुग्यो सगरमाथाको उचाइ ?
सगरमाथाको उचाइ पहिलोपटक १९ औं शताब्दीमा ‘द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे’ अन्तर्गत ‘ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डिया’ले मापन गरेको थियो । त्यसताका ८,८४०.५० मिटर उचाइ सार्वजनिक गरिएपनि त्यसलाई आधिकारिक मानिएन किनकी सो काम असाध्यै पुरानो प्रविधिको प्रयोगबाट सम्पन्न गरिएको थियो ।
त्यसपछि, सन् १९५४ मा ‘सर्भे अफ इण्डिया’ले मापन गर्दा सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर निस्कियो जसलाई हामीले अहिलेसम्म आधिकारिक उचाइ मान्दै आएका थियौं ।
यसका अतिरिक्त पनि विभिन्न राष्ट्रहरुले आआफ्नै तरिकाले धेरैपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका छन् । सन् १९७५ मा चीनले मापन गर्दा ८८४८.१३ मिटर उचाइ निकालेको थियो भने सन् २००० मा अमेरिकाले मापन गर्दा ८,८५० मिटर उचाइ रहेको पुष्टि ग¥यो ।
सन् २००५ मा चीनको ‘नेशनल ब्युरो अफ सर्भेइङ एण्ड म्यापिङ’ले मापन गर्दा ८,८४४.४३ मिटर उचाइ भएको पुष्टि गरेको थियो ।
वि सं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने भन्दै पुनः उचाइ मापन गरिनुपर्ने जस्ता प्रस्तावहरु आएका थिए । जसलाई मध्यनजर गर्दै सन् २०१७ को डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेपछि नेपालले पहिलो पटक आफैले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सगरमाथाको बारेमा केही तथ्यहरुः
नेपालको प्रदेश नं १ को उत्तरपूर्वी भेगस्थित सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको सगरमाथा नेपाल र तिब्बतको सिमानामा पर्दछ ।
शुरूमा ‘पिक ’ नामाकरण गरिएको सगरमाथालाई सन् १८६५ मा सर्वे अफ इण्डियाका तत्कालीन सर्वेयर जेनरल कर्णेल जर्ज एभरेष्टको सम्मानस्वरुप उनैको नामबाट माउन्ट एभरेष्ट नामाकरण गरिएको थियो ।
नेपाली नाम ‘सगरमाथा’ राख्ने श्रेय भने इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई जान्छ ।
सगरमाथालाई तिब्बती भाषामा छोमोलुङ्मा भनिन्छ जसको अर्थ हो ‘पवित्र आमा’ ।
पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुन् ।
प्रथम नेपाली महिला सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामु शेर्पा हुन् ।
यसअघि लोकपथमा प्रकाशित यो समाचार/भिडिओ पढ्नुभएको/हेर्नुभएको थियो ?
कामीरिता शेर्पा उर्फ साहसीको ‘ब्राण्ड’, २४ पटक सगरमाथा चढ्नुको रहस्य यस्तो
प्रकाशित मिति: २०७७,मङ्सिर,२३,मंगलवार १४:०८
पूर्वपञ्चलाई महाधिवेशनको चटारो, अध्यक्षमा ६ जना आकांक्षी
पूर्वपञ्चहरूको पार्टीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रतातन्त्र पार्टी (राप्रपाको) महाधिवेशन आउँदो कात्तिक २७ देखि ३० सम्म हुँदैछ । २०४६ मा प्रजातन्त्र
पोखरामा विभिन्न देशका राजदूतदेखि विशिष्ट कूटनीतिज्ञको हाइकिङ (तस्बिरसहित)
पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा यस वर्षको विश्व पर्यटन दिवसका कार्यक्रममा विभिन्न ११ देशका राजदूत तथा विशिष्ट कूटनीतिज्ञ सहभागी बनेका
काठमाडौंको आकाशमा १० फन्को : विमानभित्र रुवाबासी, भएको के थियो ?
काठमाडौं । सोमबार बिहान ८ बजेर ३२ मिनेटमा बुद्ध एयरको विमान नियमित उडान भर्न विराटनगरका लागि उड्यो । विमानमा ७३
दुई वर्षयता चलचित्र क्षेत्र कोल्याप्स जस्तै छ । फिल्म क्षेत्रको नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड काम गरिहेको छ तर परिणाम